သတင်း - မန်းဂနိစ်သတ္တု စျေးကွက်လေ့လာခြင်း
မန်းဂနိစ်သတ္တုရိုင်းသည် အလုံးစုံတည်ငြိမ်သော်လည်း အောက်ဆိုဒ်သတ္တုရိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းတစ်ဝက်ကို ကွဲပြားစေမည်ဖြစ်သည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. လက်ရှိတွင်၊ ဆိပ်ကမ်းနေရာ အရောင်းစျေးနှုန်းသည် ဆိုက်ရောက် စရိတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အခြေခံအားဖြင့် နိမ့်ကျနေပြီး လပေါင်းများစွာ အဆက်မပြတ် ဇောက်ထိုးကျနေသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ကုန်သည်များသည် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တင်ပို့ရန် ဆန္ဒမရှိပေ။
2. မကြာသေးမီက ရောက်ရှိလာသည့် အခြေအနေနှင့် သင်္ဘောဇယားခန့်မှန်းချက်မှ၊ နွေဦးပွဲတော်တွင် ဂိုဒေါင်များ ကျဆင်းလာချိန်တွင် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဆိပ်ကမ်းစာရင်းများ ထပ်မံတိုးလာနိုင်ခြေရှိသော်လည်း အများစုမှာ တောင်အာဖရိကမိုင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့အနက်မှ တန်ချိန် 1.42 သန်း၏ ဆိပ်ကမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းများ၊ တန်ချိန် 690000 ခန့်ရှိ တောင်အာဖရိက မိုင်းတွင်း စုစုပေါင်းစာရင်း၏ ထက်ဝက်နီးပါး၊ တန်ချိန် 280000 ခန့်ရှိ တောင်ပိုင်းတစ်ဝက်၊ သြစတြေးလျမိုင်း၊ Gabon မှ ပင်မအောက်ဆိုဒ်သတ္တုရိုင်းနှစ်ခု သိုလှောင်မှု တန်ချိန် 510000 ခန့်၊
3. ပွဲတော်အပြီးတွင်၊ Guangxi ရှိ အစောပိုင်းပိတ်စက်ရုံများ ထုတ်လုပ်မှု ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ခနှင့် သတ္တုစပ်စျေးနှုန်းများပေါ်မူတည်၍ မသေချာပါ။
နိဂုံးချုပ်ရလျှင် နွေဦးပွဲတော်အပြီးတွင် မန်းဂနိစ်သတ္တုရိုင်းများ စုစုပေါင်း သိုလှောင်မှု တိုးလာခြင်းကြောင့် စျေးကွက်၏ ခံစားချက်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိခိုက်နိုင်သော်လည်း ဆိပ်ကမ်းစာရင်းတွင် တောင်အာဖရိက သတ္တုရိုင်းများ၏ အချိုးအစား များပြားမှုကြောင့် အောက်ဆီဂျင် အချိုးအစား၊ သတ္တုရိုင်းသည် သေးငယ်သည်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ကုန်စည်တင်ပိုင်ခွင့်၏ အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ မြင့်မားပြီး နောက်ကျရောက်ရှိမှု၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ မနည်းလှပါ၊ oxidized ore သည် တက်ရန်လွယ်ကူသည်။